Mianara bebe kokoa momba ilay mpanakanto mahafinaritra César Manrique | Famoronana an-tserasera
Mianara bebe kokoa momba ilay mpanakanto mahafinaritra César Manrique
«Lanzarote» avy amin'i Jean-Louis POTIER dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-ND 2.0
Raha misy mpanakanto espaniola izay misongadina indrindra amin'ny fifandraisany lehibe amin'ny natiora, izay nasehony tamin'ny sangan'asany, izany hoe, tsy isalasalana, ilay César Manrique lehibe (1919-1992).
Avy amin'ny Kanadiana (teraka Arrecife, Lanzarote), ity mpanao hosodoko sy mpanao sary sokitra mampiraikitra zavakanto sy natiora, miaro ny sanda ara-tontolo iainan'ny Nosy Canary sy izao tontolo izao.
Andao jerena ny fahalianana sasany momba ny tantaram-piainany mahaliana.
1 Niala tao amin'ny Architecture izy hianatra Art
2 Ny dian-tongony dia mijanona amin'ny faritra maro ao Lanzarote
3 Ny tranony, toerana tsy azonao adino
4 Fondation César Manrique
5 Nahazo loka lehibe
6 Manana ny anarany ny seranam-piaramanidina Lanzarote
7 Boky manondro ny asanao
Niala tao amin'ny Architecture izy hianatra Art
Na dia nanomboka nianatra momba ny arsiteknika ara-teknika tao amin'ny Oniversiten'i La Laguna aza izy dia nandao azy roa taona taty aoriana mba hiditra ao amin'ny Superior School of Fine Arts any San Fernando, izay nanatombohany ny tena fiantsoana azy, ho mpampianatra zavakanto ary mpanao hosodoko sy mpanao sokitra .
Ity fironana amin'ny maritrano ity dia hita taratra amin'ny fitambaran'ny asany.
Ny dian-tongony dia mijanona amin'ny faritra maro ao Lanzarote
«File: Huis van Cesar Manrique - panoramio.jpg» avy amin'i Eddy Genne dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 3.0
Misy fitsangatsanganana an-tsambo any amin'ny nosy Lanzarote izay mitondra antsika mankany habaka mahatalanjona noforonin'i César Manrique, izay, ankoatry ny fankafizany ny kanto dia mamela antsika hiroboka tanteraka amin'ny tontolo zavamaniry sy volkano izay mampiavaka ity nosy hafahafa ity. Ny sasany amin'ireo habaka feno famoronana ao Lanzarote sy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia: ny Mirador del Río, ny Farihin'i Costa de Martiánez, ny Mirador de la Peña, Jardin de Cactus, Playa Jardin, Parque Marítimo César Manrique ary a lava sy ny sisa.
Ny tranony, toerana tsy azonao adino
Ny tranon'ilay mpanakanto, na ny Taro de Tahíche, arivo metatra mahery ny velarany iray amin'ireo toerana manintona indrindra any Lanzarote. Ny fanaingoana azy, amin'ny fomba mitovy amin'ny toerana nisamborana azy ny kantony, dia mampita antsika amin'ny natiora amin'ny fomba manokana.
Izy no namorona azy tamin'ny alàlan'ny fanararaotana ny habaka voajanahary nomen'ny bolabola volkano dimy. Ny tranobe dia miorina amin'ny vokatra lava an'ny vokatry ny fipoahana taloha teo amin'ny nosy. Hitantsika ny fampifangaroana ataon'ny mpanakanto amin'ny filàny telo lehibe: ny kanto, ny maritrano ary ny natiora.
Manan-danja ihany koa ny loko amin'ny zavakantony. Ireo dia loko izay taratry ny toetran'ny Lanzarote: mena sy mainty (satria nosy volkanika, misy fasika mainty), fotsy (jiro mandro ny nosy), maintso (ny lokon'ny natiora, ny cactus malaza Lanzarote) ary ny manga (an'ny ranomasina manodidina ny nosy).
Ireo singa ampiasainy amin'ny sanganasany matetika dia singa voajanahary, toy ny hazo, jute na ny vatokely mampiavaka ilay faritra.
Ny César Manrique Foundation (FCM) noforonina mba hitehirizana sy hanaparitahana ny sanganasan'ny artista lehibe. Ny sehatra iasan'izy ireo lehibe indrindra dia ny fiarovana ny tontolo voajanahary, ny fampiroboroboana ny zava-kanton'ny plastika sy ny taratry ny kolontsaina.
Ao an-tranon'ilay artista izy io, izay noheverina ho ivon-toeran'ny kolontsaina taorian'ny nahafatesany. Ao anatin'izany no aseho ny sanganasany marobe. Tranombakoka tsy azonao adino.
Nahazo loka lehibe
Nomena ny Loka Iraisam-pirenena momba ny haiaina sy fizahantany ary ny loka eropeana izy noho ny fandraisany anjara lehibe tamin'ny fiarovana ny natiora tamin'ny asany zavakanto. Ho fanampin'izany, nomena loka hafa koa izy toa ny medaly volamena ho an'ny hai-kanto, ny loka Canary Islands ho an'ny hai-kanty, ny loka Fritz Schumacher avy amin'ny Fondation Foundation FSV any Hamburg ... noheverina ho Zanakalahin'i Lanzarote sy Arrecife ary zanaka natsangan'i Gran Canaria, Tías, sns.
Manana ny anarany ny seranam-piaramanidina Lanzarote
Zava-dehibe tokoa ity mpanakanto ity ao amin'ilay faritra ka ny seranam-piaramanidina mihitsy no mitondra ny anarany: Seranam-piaramanidina Cesar Manrique.
Boky manondro ny asanao
Betsaka ny boky manadihady tsara ny sanganasa kanto sy ny kanto an'ny César Manrique.
Raha ny filazan'ny olona manodidina azy dia olona saro-pady i Manrique ary nahay nanaparitaka ny filan'ny hatsarana sy ny kanto ary koa ny fitiavany natiora.
Ary ianao, mahalala zavatra hafa momba ny fiainan'ity mpanakanto mahafinaritra ity ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mianara bebe kokoa momba ilay mpanakanto mahafinaritra César Manrique